पागल गति को जीवन, काम, मित्र, जिम, फेरि काम कसरी छ, यो सबैका लागि पाउन समय संग प्राप्त गर्न एक केटी छ । जहाँ संग प्राप्त गर्न उनको, भन्न के, कुरा गर्न कसरी छ । यो सबै खपत यति धेरै ऊर्जा छ कि धेरै मानिसहरू बस एक शान्त स्नातक जीवन । तर, त्यहाँ एक सिद्ध तरिका सरल बनाउन सबै यो संग प्राप्त गर्न एक केटी मा इन्टरनेट । म शर्त तपाईं समय को धेरै खर्च मा सबै प्रकारका, सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल साइटहरु र बस सर्फिंग हुनत, त्यो समय मा तपाईं हुन सक्छ भेट पटक पहिले नै छ । यो के कसरी राम्रो तरिकाले, र त्यसैले कि यो जस्तै हेर्न छैन एक नीरस उपश्रेणी, म. यो कुरा छैन भने तपाईं कसरी सोच्न संग प्राप्त गर्न एक केटी मा एक डेटिङ साइट वा सामाजिक नेटवर्क मा सधैं अपलोड मात्र आफ्नो फोटो । तिनीहरूले, राम्रो गुणवत्ता को हुनुपर्छ, तर तपाईं सोध्न हुँदैन एक पेशेवर फोटोग्राफर परिचित छ जो तिनीहरूलाई तस्वीर गर्न रूपमा तपाईं थियो भने बस गोली लागि कवर को एक पत्रिका छ । सम्झना कि एक दिन तपाईं अझै पनि पूरा गर्न छ वास्तविक जीवन मा र उनको आशा हुनेछ पनि उच्च छ, र तपाईं हुनेछ एक सानो बिट विभिन्न. पनि, सिर्जना गर्न एल्बम संग भुत्ते नाम म, हामी, प्रकृति, जन्मदिन र यति मा । यो हुन गरौं, केही फोटोहरु, तर उकालो छ । यदि तपाईं यस्तो छैन, त्यसपछि सुरक्षित गर्न जाने एक नाइट क्लब छन् किनभने, सधैं काम व्यावसायिक फोटोग्राफरहरू । त्यसपछि बस पाउन आफ्नो फोटो र साइट मा लोड एक नयाँ अवतार तपाईं पहिले नै छ । खैर, वा एक मित्र सोध्न फोटोग्राफर बनाउन तपाईं को एक फोटो तपाईं सुन्दर छ । रंग त्यहाँ आफ्नो सम्पूर्ण जीवनी वा हास्यास्पद कथाहरू. सम्झना कि छ बहिनी को प्रतिभा, त्यसैले लेख्न आफैलाई बारेमा सकेसम्म धेरै रूपमा, छोटकरीमा र चाखलाग्दो कुरा छ । तपाईं बारेमा लेख्न के आफैलाई यो पहिलो हुनेछ भन्ने जानकारी मा केटी आफ्नो पेज देख्नेछन्. त्यसैले, यस आधारमा, त्यो थप्न हुनेछ उनको सुरुमा छाप छ । प्राप्त गर्न प्रयास उनको रुचि र अंकुशाकार, लेख्न केही, त्यसैले त्यो एक इच्छा गर्न तपाईंले सोध्न प्रश्नहरू र जारी गरिन्छ । उदाहरणका लागि: ओह सबै), सेक्स लागि पैसा चढाएको छैन, यो राम्रो छ संग छैन गडबड गर्न यी उदाहरणहरू छन् के तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ स्तम्भ मा आफैलाई बारेमा, र तल एक स्क्रिनसट छ के को लिखित. बुझ्न, आफ्नो गम्भीरता आवश्यक छैन कसैलाई छैन देखि निर्माण आफैलाई के तपाईं साँच्चै छैनन्. किनभने ढिलो होस् वा पछि तपाईं अझै पनि आंसू बंद यो मास्क. कुनै एक देख्न हुनेछ, आफ्नो छवि को एक सुपर-कठिन मान्छे वा एक छनौटको मास्टर पर्याप्त छन् यस्तै नायक. तपाईं अझै सिक्न चाहनुहुन्छ कसरी संग प्राप्त गर्न मा एक केटी, इन्टरनेट र हुक यो, को उत्तर धेरै सरल छ.
आविष्कार गर्न केही कथाहरू, खेल्न लाटा भूमिकाहरूको र मा हुन अनन्त तनाव । मलाई विश्वास छ, यो सबै महसुस पनि माध्यम स्क्रिन छ । र त, तपाईं हुनेछ रूपमा आराम, सकेसम्म विश्वस्त मा आफैलाई अरू के गर्छ एक केटी आवश्यक छ । मुख्य कुरा गर्न रोल गर्न.
आफैलाई हुनुको भइरहेको छैन के
सम्झना कि, आफ्नो लक्ष्य चासो को केटी, र छैन छ, अर्को भर्चुअल मित्र । कसरी पूरा गर्न एक केटी अनलाइन र के लेख्न. पक्कै छैन, गरौं अमेरिकी प्राप्त, सौन्दर्य, किन छैन तपाईं सुतेको र अन्य अर्थहीन छ । यी सबै वाक्यांश भएको छ, एक सय वर्ष पहिले नै अनि तपाईं छैन पनि हेर्न आफ्नो ठूलो-हजुरआमा, छ । बालिका सधैं नवीनता चाहनुहुन्छ. गर्न आवश्यक छैन आविष्कार केही मूल बाटो प्रयास, षड्यन्त्र, उनको चासो छ । त्यसैले बिल्कुल सबै आउँछ । क्रम मा बाहिर खडा को पृष्ठभूमि विरुद्ध अन्य सबै मान्छे पठाउन गर्ने उनको विभिन्न प्रकारका जडीबुटी, यो पर्याप्त छ गर्न लेख्न एक सामान्य साधारण वाक्यांश-कथन छ । यहाँ छ के को एक उदाहरण म लेख्न, उहाँले कम छ, र तपाईं छौं एक मिठाई केटी, त तपाईं पुन सेक्सी, र म के तपाईं संग कसरी, मूड, कसरी साँझ जान्छ, फेला मेरो पति यहाँ म टिप्पणी गर्न सक्छन् मा उनको चरित्र वा कामुकता द्वारा न्याय फोटो वा बस. तल को एक जोडी हो मेरो उदाहरण को पुरानो पत्राचार । पनि भने, अब तपाईं साथ कुराकानी दस बालिका, त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रत्येक महसुस गर्नुपर्छ भने त्यो तपाईं एक्लै । तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै गुण, सोख, र जीवनको एक तरिका छ, जो अर्थ यो दृष्टिकोण तिनीहरूलाई प्रत्येक हुनुपर्छ देख्यो लागि एक विशेष र अद्वितीय तरिका हो । लचीलापन र कल्पना । बालिका प्रेम ध्यान बस जस्तै हामी पुरुष त, प्रयास गर्न उनको देखाउन आफ्नो चासो मा, उनको सकेसम्म धेरै र लाग्छ छैन मा एक स्टिरियोटाइप तरिका हो । सबै बालिका बस प्रेम फोटो खिंचवाने गर्न, व्यावसायिक देखि फोटोग्राफरहरू, चित्र क्लब र रेस्टुरेन्ट तर तपाईं सम्झना गर्न एक महत्त्वपूर्ण नियम: को भन्दा यी फोटो मेल खान्छ वास्तविकता, कुनै कुरा कसरी यो दुःखी । अब यो फोन को हरेक केटी त धेरै कार्यक्रम डाउनलोड गर्न बनाउन खूबसूरती सम्पादन चित्रहरु को लागि र आफैलाई मा, तिनीहरूलाई तपाईं कि राम्रो छैन, यो थाह छ । प्रयास गर्न ध्यान अध्ययन गुणस्तर तस्वीर, कसरी देख्न चमकीले उनको अनुहार र अन्य साना कुराहरू छ । सामान्य मा, सम्झना कि, यो चित्र आशा वास्तविकता स्पष्ट सिर्जना डेटिङ बारेमा इन्टरनेट मा. त्यसैले, मानसिक लागि आफैलाई तयार छ भन्ने तथ्यलाई तपाईं देख्न हुनेछ अलि फरक केटी सभामा भन्दा फोटो । र छैन भन्न पछि म थिएन चेतावनी तपाईं यस बारे छ । भने को खोज मा एक प्रश्नको जवाफ कसरी प्राप्त गर्न एक केटी संग इन्टरनेट मार्फत तपाईं यताउता बरालिएका गर्न एक डेटिङ साइट, त्यसपछि एक को सबैभन्दा सिद्ध तरिका छ हुर्काउन गर्न आफ्नो प्रोफाइल मा खोज. लगभग हरेक साइट को छ भनेर एक सेवा बनाउन हुनेछ तपाईं सबैभन्दा लोकप्रिय मान्छे हो, तपाईं तुरुन्तै कसरी हेर्न बालिका शाब्दिक फेंक तपाईं संग नयाँ सन्देशहरू बस. पनि, समाचार लाइन छ । यस आकर्षित हुनेछ, पनि अधिक प्रशंसक गर्न सक्नुहुन्छ । अनि त्यसपछि, आफ्नो विवेक मा छनौट, धेरै राम्रो संग केहि पनि साझा गर्न प्रत्येक केटी जसले यस्तो लेखे । खर्च त-भनिन्छ प्राकृतिक चयन । यो अब देखिन्छ, तपाईं यस चाल र, तर वास्तवमा यो चिप काम धेरै सुन्दर । यो तपाईंलाई मदत गर्न बाहिर खडा बीचमा सारा विशाल भीड को मान्छे र संभावना वृद्धि हुनेछ भनेर केटी हुनेछ तपाईं लेख्न छ । यो लायक छ यो सस्तो, तर परिणाम छैन हुनेछ तपाईं राख्न प्रतीक्षा । बालिका प्रेम गर्नेहरूलाई तरिका बाहिर खडा, किन कि छ बनाउन क्रम मा एक पहिलो छाप, गर्दा केटी थाहा छैन तपाईं सबै मा, तपाईं आफैलाई बनाउन सक्छ एक वीआईपी-खाता र उनको आकर्षित ध्यान । र त्यसपछि यो सबै तपाईं मा निर्भर र आफ्नो क्षमता मा कुराकानी गर्न वेब मा.
र तपाईं हुनेछ धेरै कार्यहरु र विकल्प संग एक
यो अन्तिम छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सल्लाह बैठक गर्दा एक केटी मा इन्टरनेट । उनको गरौं भन्ने थाहा छ त्यो मा रुचि हुनेछ, तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न भीड देखि जवान मानिसहरूलाई लेख्न उनको सामाजिक नेटवर्क मा. तर छैन पनि धेरै समय खर्च, इन्टरनेटमा किनभने तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ केहि पूर्ण विभिन्न छ, सही छ । संचार मा एक रहन अधिक रोचक र आकर्षक छ । अनलाइन डेटिङ प्रयोग रूपमा एक हुक वा अर्को बाटो डेटिङ. त्यसपछि यो लागि रहनेछ सानो मा पहिलो बैठक र रोचक रूपमा एक वार्ताकार रूपमा. र यो सम्म द्वारा छ छैन सबै, जो साँच्चै लुकाउन. त्यसैले, अग्रिम लाग्छ भन्दा आफ्नो छवि को विषय हुनेछ बारेमा कुरा, यो ठाउँ को आफ्नो बैठक र कसरी तपाईं छक्क सक्छ र यो जित्न. तपाईं महसुस कि मुख्य कुरा वास्तवमा इन्टरनेट देखि कुनै फरक छ, वास्तविक जीवन । अधिक तपाईं खींच संग बैठक, अधिक संभावना छ कि अरू कसैले अधिक साहसी हुनेछ र तपाईं भन्दा र उनको आमन्त्रण गर्न एक मिति. धेरै मान्छे धेरै डराएका को एक व्यक्तिगत बैठक किनभने, त्यहाँ पर्याप्त हुँदैन बस्ने आफ्नो घर मा अभ्यास र बहाना गर्नु गर्न एक -वर्ष । काम हेर्न उनको आँखा मा, त्यहाँ हुनेछैन समय को लागि मिनेट प्रतिबिम्बित गर्न मा एक रोचक जवाफ, या जानकारी को लागि खोज गर्न. वास्तवमा, सबै धेरै सरल छ । तपाईं ले उनको फोन नम्बर कल, र एक नियुक्ति छ । सबै छ । अनावश्यक समस्या छ । जस्तै व्यवहार पठाउन छैन उनको मूर्ख भर्चुअल उपहार । संख्या लिन र ऐन । मुख्य पाउनु कत्ति रोमाञ्चकारी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने छ संग — बालिका मा नै समय मा एक दिन. तपाईं चयन गर्न सक्छन्, आफ्नो तिखो छेडखानी सीप, मूल्यांकन उनको उपस्थिति र यो हुन सक्छ, बारम्बार हरेक दिन पाउन सम्म तपाईं एक वा धेरै बालिका, जो तपाईं साँच्चै रुचि हुनेछ. त्यहाँ सजिलो चासो, केटी हुनुहुन्छ भने छैन विषय मा. त्यो गर्दैन हेर्न आफ्नो, आफ्नो इशाराहरू, आफ्नो अनुहार अभिव्यक्ति बस फोटो, मुस्कान र आफ्नो सन्देश. धेरै महत्त्वपूर्ण छ मा पहिलो परिचय पछि, सबै यो छ ठीक कुन बालिका ध्यान मा पहिलो परिचय हो । र त तपाईं तुरुन्तै प्रयोग आफ्नो. त्यहाँ यो छ गाह्रो गर्न चासो केटी, तपाईं विषय मा यो पहिलो नकारात्मक छ । र दोस्रो तपाईं देख्न सक्दैन. एक नियम को रूप मा, एक वास्तविक बैठक केटी हुन बाहिर जान्छ धेरै छोटो, फुलर, र प्रेम रक्सी. यो यस्तो एक मानक सेट को सुन्दरता इन्टरनेट देखि छ किनभने यो पनि धेरै सजिलो छ, तपाईं को लागि पछि लुकाउन आफ्नो खाता मा सामाजिक नेटवर्क व्यवस्थापन गर्न । त्यसैले, निर्माण आफैलाई अनावश्यक भ्रम र तुरुन्तै लागि तयार हुन कुनै पनि नतिजा आफ्नो पहिलो बैठक । तेस्रो माइनस छ, तपाईं छैन सुन्नुहुन्छ उनको आवाज । त्यहाँ मान्छे कसको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र तुरुन्तै लिन उनको फोन नम्बर । र त्यसपछि यो हुनेछ एक लाज छ. जब यो प्यारा लघु गोरा सुरु हुनेछ कुरा मा धुवाँ को आवाज एक चालीस-वर्ष पुरानो मानिस वा त्यो तपाईं जस्तै केहि छ । गम्भीर, यो हेर्न धेरै मूर्ख र. जस्तै काम म सिकाउन । मा आफ्नो हुक लेख्न, उनको सही बाटो दिन उनको नम्बर, किनभने म रुचि प्रत्यक्ष संचार । यसरी तपाईं निरुत्साहित उनको र दिन छैन तपाईं एक तरिका हटाउनुहोस् । डायल र उनको कुरा केही मिनेट लागि, आफ्नो पहिलो संचार, वा त्यो विचार भनेर अब तपाईं कल हुनेछ, उनको एक मिलियन पटक एक दिन. यो महत्त्वपूर्ण छ मा यो सबै गर्न सुरुमा प्रकुपित यसको चासो र तुरुन्तै कदम. तपाईं चाहनुहुन्छ भने गम्भीर पम्प मा आफैलाई अनलाइन डेटिङ, त्यसपछि म तपाईं को लागि एक पाठ्यक्रम मा यो विषय प्रलोभन अनलाइन र सम्झना कि कौशल को मा संचार को इन्टरनेट यो निश्चित एक प्लस छ, तर प्रत्यक्ष संचार हुन सक्दैन प्रतिस्थापन । विकास छ ।
डेटिङ च्याट →